भर्खर हाम्रो सर्जिकल गाउनहरू तातो बिक्रीमा छन्। हाम्रा सर्जिकल गाउनहरू विश्वका धेरै देशहरूमा बेचिन्छन्। ग्राहकहरू हाम्रो उत्पादन गुण र हाम्रो बिक्री टीमबाट हाम्रो सेवा संग धेरै सन्तुष्ट छन्। Sterilization: बाँझ अनुप्रयोगहरू: यो शल्य चिकित्सा आपरेशन र बिरामी उपचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। Inspec ...
हालसालै हाम्रो डिस्पोजेबल अलगाव गाउनहरू तातो बिक्रीमा छन्। हाम्रो पृथक गाउन संसारका धेरै देशहरूमा बेचिन्छन्। ग्राहकहरू हाम्रो उत्पादन गुण र हाम्रो बिक्री टीमबाट हाम्रो सेवा संग धेरै सन्तुष्ट छन्। उत्पादन: डिस्पोजेबल अलगाव गाउन शैली A: सामग्री / सामग्री: १००% polypropylene गैर बुना ...
हालसालै हाम्रो प्रयोज्य सुरक्षात्मक कपडाहरू तातो बिक्रीमा छन्। हाम्रो सुरक्षात्मक सूट धेरै देशहरूमा बेचिन्छन् जस्तै युके, जापान, क्यानडा, मलेसिया आदि। ग्राहकहरू हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर र हाम्रो बिक्री टीमबाट हाम्रो सेवासँग सन्तुष्ट छन्। ...
२०-०6-०9 मा व्यवस्थापक द्वारा
हालसालै हाम्रो डिस्पोजेबल एप्रनहरू तातो बिक्रीमा छन्। हामीले विश्वभर ग्राहकहरु लाई आपूर्त गरेका छौं। ग्राहकहरू हाम्रो उत्पादन गुण र हाम्रो बिक्री टीमबाट हाम्रो सेवा संग धेरै सन्तुष्ट छन्। हाम्रो डिस्पोजेबल एप्रनको क्यारेक्टरहरू तल छन्: १) एन्टि-वाटर, एन्टी-तेल, एन्टि-डस्ट, बिभिन्न क्षेत्रमा विस्तृत प्रयोग ....
हाम्रो IgM / IgG परीक्षण क्यासेट गर्म बिक्री हो। हामीले विश्वभर ग्राहकहरु लाई आपूर्त गरेका छौं। ग्राहकहरू हाम्रो उत्पादन गुण र हाम्रो बिक्री टीमबाट हाम्रो सेवा संग धेरै सन्तुष्ट छन्। हाम्रो कारखानासँग कडा टेक्निकल फोर्स छ। कोरोनाभाइरस रोग २०१ 2019 (COVID-१)) आईजीएम / आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट एक द्रुत, क्वालिटी हो ...
हालसालै हाम्रो फ्याक्ट्रीले हाम्रो जापान ग्राहकलाई ,000००,००० पीसी अनुहार ढाल बेची ग्राहक हाम्रो उत्पादनको गुणवत्ता र हाम्रो सेवाबाट धेरै सन्तुष्ट छन्। हाम्रो अनुहार ढालका वर्णहरू निम्न छन्: १. यो उत्पादनले उच्च पारदर्शी PET प्रयोग चौतरौं अनुहार अलगाव र सुरक्षाको लागि गर्दछ। २. उत्पाद हल्का छ ...
धुलो प्रूफ पाल्तु फेस ढाल, सुरक्षा लुगा, सुरक्षा गाउन, डिस्पोजेबल मेडिकल कपडा, पानी प्रूफ एप्रन, पानी प्रूफ एचडीपी एप्रन,